गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार-विप्लव वार्ता टोली गठन – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
१८ फाल्गुन, २०७७ १६:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँग वार्ता गर्ने भएको छ । मंगलबार सरकारले वार्ता टोली गठन गरे लगत्तै विप्लव समूहलेसमेत वार्ता टोली बनाएको हो । दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेपछि सरकार र विप्लव समूहको वार्ता निश्चित भएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गर्दैछन् भने विप्लवको वार्ता टोलीको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले गर्नेछन् ।
सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् भने विप्लव वार्ता टोलीको सदस्यमा उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा सरकार रहेको बताए । सोही प्रक्रियामा वार्ताका लागि गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको उनको भनाइ छ ।
‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँप्रति लागेको मुद्दा होस्। उहाँको हतियारको कुरा होस्। यी सबैलाई टुंगो गर्नका निम्ति, अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो’, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने ।
सरकारले वार्ता टोली गठन गरे लगत्तै विप्लवले उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन भएको जानकारी गराएका हुन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत् वार्ता टोली गठन भएको जानकारी गराएका हुन् ।
‘नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको छ’, विप्लवले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी बन्न पार्टीका केन्द्रीय समिति सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता क.प्रकाण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य क.दीपक सदस्य रहेको दुई सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी गराउँदछौं ।’